बाग्मती सफाइ अभियान: फोहोर फाल्नेलाई यस्तो छ कारबाही
सुशील दर्नाल काठमाडौँ, २८ असार । नागरिकस्तरबाट सुरु गरिएको बाग्मती सरसफाइ अभियानलाई समुदायसम्म जोड्न नसक्नुलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिइएको छ । बाग्मती नदीकिनार वरपरका बासिन्दा र समुदाय स्वस्फूर्तरुपमा अभियानमा सामेल नभएसम्म नदीलाई सफा, स्वच्छ बनाउन चुनौती...
हराएका व्यक्ति मृत भेटिए
विराटनगर, २८ असार । कोसी हरैचा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको जुडीपैनीमा डुबेर एक मानिस आज मृत फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार कोसी हरैचा नगरपालिका वडा नं १३ वस्ने ४५ वर्षीय रामबहादुर...
नेपालमा जान्छ दैनिक चारवटासम्म भूकम्प, थाहा नहुने कारण के हो ?
सिवी अधिकारी काठमाडौँ, २८ असार । बढ्दो विद्युत्भार कटौतीका कारण भूकम्प मापनसम्बन्धी उपकरण नियमितरुपमा सञ्चालन हुन कठिनाइ भएको छ । अतिजोखिम र संवेदनशील विनासकारी भूकम्प मापन गर्ने मुलुककै एकमात्र केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र लैनचौरमा...
ससुरालीको दाइजो बेचेर प्रहरीलाई घर !
सुन्दरीजल, २८ असार । विवाहमा ससुरालीबाट प्राप्त औँठी, सिक्री र मोटरसाइकललगायतका दाइजो बेचेर प्रहरी हवल्दार नवराज खड्काले बज्रयोगिनी मन्दिरको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीका लागि आवासगृह निर्माण गरी उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक...
विश्वकप फुटबल: तेस्रो स्थानका लागि ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्स भिड्ने
काठमाडौं, २८ असार । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सन् २०१४ को तेस्रो स्थानका लागि भोलि (आइतबार) बिहान ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्स आमनेसामने हुने भएका छन् । ब्राजिलको ब्रासलियामा हुने सोे प्रतियोगिताको खेल बिहान १ बजेर ४५...
एमालेको मतदान सम्पन्न, गणना अपराह्नदेखि
काठमाडौं, २८ असार । नेकपा (एमाले) को नवौँ महाधिवेशनको निर्वाचनको मतगणना मध्यान्ह १२ बजेपछि सुरु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र उम्मेदवारको सल्लाहमा मध्यान्हबाट मतगणना गर्ने निर्णय गरिएको हो । मतगणना पहिला...
रिम्पोचेको अन्त्येष्टीमा सरकारको व्यावधान
काठमाडौं , २८ असार । तिब्‍बती बुद्ध धर्म र अभ्यासमा दलाई लामा पछि हाराहारीमा आउने १४ औं समरपाको चाहनाअनुसार नेपालमा अन्त्येष्टि गर्ने तयारी भइरहँदा सरकारले त्यसका लागि अनुमति दिन अस्विकार गरेको छ। आफ्ना हजारौं...
यौन सम्पर्क गर्न नदिएपछि पत्नीको हत्या
झापा, २८ असार । यौन सम्पर्क गर्न नदिएको भन्दै झापाको सुरुङ्गाका एक व्यक्ति ले पत्नीको हत्या गरेका छन। कनकाई नगरपालिका वार्ड नम्वर ७ चप्रामारी निवासी २७ वर्षीय उमानाथ गहतराज (विश्वकर्मा)ले बुधबार राती २३ वर्षीया...
नेता चुन्‍न रातभर मतदान
काठमाडौं, २८ असार । एमाले महाधिवेशनको नवौं दिन नेतृत्व चयनका लागि रातभर मतदान भएको छ। राजधानीको भृकुटीमण्डपमा निर्धारित समयभन्दा १० घन्टा ढिला शुक्रबार साँझ करिब पौने ६ बजे पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले मतदान सुरु...
मुद्दा कमजोर बनाउन घूस
काठमाडौ, २८ असार । मुद्दा कमजोर बनाउन घूस मागेको अभियोगमा अख्तियारले एक सरकारी वकिलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । चोरीमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर घूस मागेको अभियोगमा पक्राउ परेका काठमाडौंका सहायक...
‘प्यानल बनाउनु गलत’
काठमाडौ, २८ असार । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अध्यक्ष पदका दुई प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले प्यानल बनाउनु गलत भएको बताएका छन् । जारी नवौ महाधिवेशनमा शुक्रबार मतदान गरी बाहिरिूदै गर्दा खनालले...
ट्रफी बार्सिलोनाको टिममेट लिओनल मेस्सीले जितोस्ः नेयमार
काठमाडौँ, २७ असार । आफ्नै घरेलु मैदानमा २० औँ संस्करणको जारी विश्वकप फुटवलको उपाधी उचाल्ने ब्राजिलको सपनालाई जर्मनीले चकनाचुर बनाइदियो । कोलम्बियाविरुद्धको क्वाटरफाइनलका क्रममा ढाडको एउटा हड्डी भाँचिएका कारण विश्पकप गुमाएका ब्राजिलियन सुपरस्टार मैदानमा...
« 1 … 5,608 5,609 5,610 5,611 5,612 … 5,780 »